China DuoDuo miforitra entana trolley DX3015 maivana Aluminum Collapsible sy Portable Fold Up Dolly mpanamboatra sy mpamatsy |Duoduo
Trolley entana miforitra DuoDuo DX3015 Aluminum maivana azo harodana sy azo entina miforitra Dolly
Ampahany : DX3015
Habe misokatra: 27.5x31x95CM
Haben'ny aforitra: 39.5x27x8.5CM
Haben'ny takelaka: 27x22CM
Fahaiza-manao: 20 KGS
Haben'ny baoritra: 55x42x29CM
Sarety entana azo aforitra kely, tena maivana ary azo aforitra, azo apetraka ao anaty kitaponao.
Famolavolana ivelany be pitsiny ahitana tsipika madio sy fandaminana miafina.
Ny tady fanohanana azo zahana dia mametraka ny entana ary manakana ny fifindrana.
Kodiaran-kodiarana be dia be mba hanatsarana ny fikirakirana.
Ny fehin-tanana fanohanana dia mivelatra efa ho avo roa heny ny halavany mba hitazonana entana maro samihafa.
Aforitra ho mora fitaterana sy fitahirizana.Aforitra ho an'ny fitahirizana kely kokoa.
Ataovy mora kokoa ny asa fihetsehanao: Maharitra sy mangina be ny kodiaran-kodiarana mahery vaika, izay manamora ny fikarakarana sy ny fanodinana ny sarety.
Tady elastika: Ny tadin'ny Bungee lava ao anatiny dia mivelatra efa ho avo roa heny ny halavany mba hitazonana entana maro samihafa.Tady fanohanana azo amboarina ny entana vatofantsika ary misoroka ny fifindrana.Ny fototra dia vita amin'ny fitaovana matanjaka sy mateza mba hitaterana ny entana, parcels, boaty.
Mbola maharary fa mavesatra loatra ny entana?Mbola sahirana amin'ny entana be loatra amin'ny dia raharaham-barotra?Mbola sosotra amin'ny fahasahiranana amin'ny fiantsenana?Ilainao ity sarety mini portable multifunction ity, aforeto mora ary apetraka ao anaty kitaponao.
Miankina amin'ny seranam-piaramanidina sy ny kaompaniam-pitaterana zotram-piaramanidina misy anao, mety takiana ianao hanamarina ny sarety entanao miaraka amin'ny valizy.Raha tsy mikasa ny hanamarina kitapo ianao dia te hanamarina amin'ny zotram-piaramanidinao raha avela ho entana entana ilay sarety.Mba hanamora ny dia kely dia azonao atao ny mieritreritra ny haka sarety miforitra.Ireo entana ireo dia manamora kokoa ny lozisialin'ny dia.Sarety entana miforitra miforitra mafy, fanorenana maivana, misokatra sy mihidy ao anatin'ny segondra izay manome fahafaha-mihetsika mora.Kodiaran-kodiarana mihoa-pampana mba hahatsara kokoa ny fikirakirana ny tady fanohanana azo amboarina mametaka ny entana ary manakana ny fifindran'ny entana.
teo aloha: Trolley entana miforitra DuoDuo DX3013 miaraka amin'ny sarety entana azo tsapain-tanana amin'ny alàlan'ny alim-by mavesatra aluminium.
Manaraka: DuoDuo Heavy Duty Hand Truck LH5001 Dual Handle Hand Truck
Sarety entana azo entina tanana kamiao vy miforitra...
3 dingana maivana aluminium tohatra miforitra sarety...
Aforitra mini vy entana trolley elektrika ...
Varotra super mafana vonona handefa kodia 6 telo-whe...